पाकिस्तानी कलाकार लिएर जोखिम मोल्न चाहिनँ : एआर रहमान « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०७८, शनिबार ०६:१०
बलिउड संगीतकार एआर रहमान एक मात्र यस्ता संगीतकार हुन्,जोसँग काम गर्न पाउनु मात्र होइन प्रत्यक्ष एक झलक पाउनुलाई पनि जीवनको ठूलै उपलब्धी ठान्नेहरु धेरै छन् । सोनी टेलिभिजनले रियालिटी शो इण्डियन आइडलमा गत साता एआर रहमान विशेष अंक प्रसारण गरेको थियो । शोमा अतिथि रहमान आफैं थिए । रहमानको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई कति प्रतिस्पर्धीलाई अप्रत्यासित थियो । त्यसैले धेरैले आफूलाई सम्हाल्नसम्म सकेनन्,खुशीले भावुक बने ।
हुन पनि संगीतको दुनियामा रहमानको छुट्टै जादु छ । उनको अलौकिक प्रतिभाबाट बलिउड मात्र होइन विश्व नै कायल छ । संगीतमा ओस्कार अवार्ड जित्ने रहमान एक्ला बलिउड संगीतकार हुन् ।
उनै संगीतकार एआर रहमान छिट्टै नयाँ प्रोजेक्ट मार्फत श्रोता,दर्शक मात्र प्रस्तुत हुँदैछन् । यसपटक भने उनी लेखक र निर्माताको भूमिकामा समेत रहेका छन् । फिल्म ९९ साङ्समा उनी पहिलोपटक लेखक र निर्माताका रुपमा देखिने भएका हुन् ।
प्रस्तुत छ आफ्नो नयाँ फिल्म र भूमिकाको विषयमा एआर रहमानसँग गरिएको कुराकानी :
गीत कम्पोज गर्दागर्दै अचानक फिल्म खेल्ने विचार कहाँबाट आयो ?
जब २००१ मा म बम्बै ड्रीम्स (हालिउड म्यूजिकल प्ले) गर्न लण्डन गएको थिएँ । थिएटरको बादशाह एण्ड्रयू लायड बेवरले मलाई सोधे कि एआर, तिमीसँग कुनै कथा छ ? तब मैले सोचेँ कि उनले मलाई यो कुरा किन सोधे । म त एक कम्पोजर हुँ । फेरि मलाई लाग्यो कि शायद मैले आफैँलाई एउटा कम्पोजरको रुपमा मात्र सीमित पो गर्दैछु कि । त्यतिखेर म शेखर कपुरको फिल्ममा व्यस्त थिएँ । जब तपाई राम्रो मान्छेसँग काम गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रभाव तपाईलाई पनि पर्छ । शेखर कपुरहरुले त्यसरी कथा लेख्दै गरेको र विभिन्न आइडिया लगाएर काम गर्दै गरेको देखेर मेरो मनमा पनि केही लेख्ने विचार आयो । फेरि मैले केही वर्कसप गरेँ । त्यही क्रममा सन् २०१० मा एउटा स्टोरीको आइडिया आयो–एउटा केटाले एउटी केटीको लागि एकसय वटा गीत लेख्छ । त्यसपछि पनि मनमा कति कथाहरु फुर्दै गए, म लेख्दै गएँ । तर मैले तय गरेँ कि पहिलो फिल्म यही कथामा बनाउछु । अनि बाँकी काम रोकेर मैले यसमा काम गरेँ । अब यो फिल्म रिलिज हुँदैछ ।
यो फिल्म बनाउन, गीत बनाउन कति मुस्किल वा फरक अनुभव रहयो ?
यो एलकेजी, यूकेजी, क्लास वन मा पढेजस्तै थियो । किनकी प्रोड्यूसरका अनुसार आफूले सोच्नुपर्छ कि फिल्मलाई हेर्न लायक बनाउन के के गर्न सकिन्छ ? फिल्ममा पैसा मात्र होइन, धेरैको समय र मिहिनेतसँगै सपनाको लगानी भएको हुन्छ । वास्तवमा फिल्मको प्रोजेक्टमा धेरै मानिसको सपना जोडिएको हुन्छ । अनि तपाई पुरै जहाजको क्याप्टेन हुनुहुन्छ भने त्यसलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पनि तपाईकै हुन्छ । मैले मेरो क्षमताअनुसार यस फिल्मलाई जतिसक्दो बेस्ट बनाउने कोशिस गरिरहेको छु ।
सुनिन्छ कि फिल्मको निर्देशकले यसमा पाकिस्तानी अभिनेतालाई राख्न चाहन्थे तर तपाईले इन्कार गर्नुभयो रे नि ?
हो, हामी यस्तो कलाकार खोज्दै थियौँ जो गायन र अभिनय दुवैमा फिट होस् । जब हामी कास्टिङ गर्दै थियौँ त्यतिबेला भारत र पाकिस्तानका कलाकार एकअर्कासँग काम गर्दै थियौँ । पाकिस्तानका धेरै कलाकार बलिउडमा काम गरिरहेका थिए ।
एकदिन मेरो निर्देशकले भने कि उनलाई खेलाउँ । तर मलाई अचानक लाग्यो–शायद परिस्थिति बदलिन पनि सक्छ । अनि मैले भनें, होइन, हामी भारतीय अभिनेता नै खोजौँ नभए हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ । नभन्दै त्यसको ६ महिनापछि नै बलिउडमा समस्या शुरु भयो । यसरी हामी बच्यौँ । हो, दुई देशबीच धेरै सांस्कृतिक आदानप्रदान हुन्छ तर यो मेरो पहिलो फिल्म थियो । अर्को कुरा म कुनै पनि किसिमको जोखिम उठाउन चाहदिनँ थिएँ ।
तपाईलाई लाग्दैन कि कला र कलाकारलाई कुनै सीमामा बाँध्नुहुँदैन ?
हो, तर अहिले यी सबैको बारेमा कुरा गर्न चाहन्नँ ।
तपाईले स्थापित कलाकारको सट्टा फिल्मको लागि नयाँ कलाकार किन छान्नुभयो ?
यो मेरो अत्यन्तै महत्वकांक्षी फिल्म हो । त्यसैले हामीलाई यस्तो कलाकार चाहिएको थियो जसले यसलाई समय देओस । एक वर्ष पियानो सिक्न लगाओस । तपाई भन्नुस कि, चलेका कुन कलाकारसँग यस्तो समय हुन्छ ? आजकल बलिउडका कलाकार एक दिनको पनि कति धेरै पैसा लिन्छन् । अनि यस रोलका लागि यस्तो कलाकार चाहिएको थियो जो युवा छ र जसलाई हामीले सिकाएर इन्डस्ट्रीलाई केही दिन सकूँ । यस फिल्मबाट हामी इन्टस्ट्रीलाई एक निर्देशक र एक अभिनेता पनि दिँदै छौं ।
तपाईलाई लाग्छ के लाग्छ कोरोना महामारीको बीचमा फिल्म रिलिज गर्नु सहि हो ? यतिबेला धेरै ठाउँमा थिएटर्स बन्द छन् । यस समय दर्शक पाउन सक्नुहुन्छ ?
मेरो फिल्मको लागि यो एउटा बरदान हो कि धेरै फिल्मको बीचमा मेरो फिल्म परेको छैन । यो फिल्म अत्यन्तै मायाले बनाएको हो । मानिस यहि फिल्म हेर्नका लागि मात्र थिएटरमा आउनु भनेको पनि धेरै ठूलो कुरा हो । अरु फिल्मसँग नजुधी एक्लै रिलिज हुन लागेको छ । त्यसैले मलाई त यो रिलिजको समय ठिक लागेको छ ।
निर्देशकको रुपमा तपाईको पहिलो फिल्म कस्तो बनेको छ ?
मेरो पहिलो फिल्मलाई चार वर्ष त पोस्ट प्रोडक्सनका लागि नै लाग्यो । यो भर्चुअल रियलिटी प्रविधिमा आधारित फिल्म हो । यसकारण पनि यति धेरै समय लाग्यो । यसलाई मैले अँग्रेजीमा निर्देशन गरेको छु । यसको इन्स्टलेशन पनि अँग्रेजीमै गरिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा तपाईले माँ तुझे सलाम…गीतको रिमेकमा अस्वीकृति जनाउनुभएको थियो । तपाई हिन्दी फिल्म म्यूजिकलाई के सोच्नुहुन्छ ? यो सहि दिशामा छ कि सुधारको जरुरत छ ?
म यसमा पुरै कमेन्ट गर्न सक्दिनँ । किनकी मलाई राम्रोसँग थाहा छैन यहाँ के हुँदैछ भनेर । तर म यो सर्टकर्टको समर्थन गर्न सक्दिनँ । मेरो बुझाइमा रिमिक्स भनेको सर्टकर्ट बाटो हो । एउटा गीत तयार हुँदा त्यससँग तीता मीठा थुप्रै यादहरु जोडिएर रहन्छन् । गीतसँगै ती यादहरु हाम्रा दिमागमा ताजा भएर रहन्टन् । तर गीतलाई रिमिक्स गरेपछि ती सुन्दर यादहरुमा पनि तोडमोड हुन्छ ।
यति मात्र हैन हाम्रा देशमा कति धेरै संगीतकार र गीतकार छन् । रिमिक्स गर्दा उनीहरुप्रति अविश्वास गरेको ठहरिन्छ । सिर्जनामा नयाँ नयाँ ट्यालेन्टहरु आउनुपर्छ, उनीहरुलाई पनि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नयाँ गीतकार, र संगीतकारबाट नयाँ काम गराउनु जरुरी हुन्छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंलाई थप्पड (भिडियोसहित)
एजेन्सी । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोंमाथि हातपात भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मंगलबार दक्षिणी